Grenada Underwater Sculpture Park dia mamita ny fanavaozana
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Grenada Breaking News » Grenada Underwater Sculpture Park dia mamita ny fanavaozana
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Karaiba • Kolontsaina • Vaovaom-panjakana • Grenada Breaking News • Vaovao • People • Resorts • tompon'andraikitra • Tourism • Travel Wire News
Novambra 9, 2021
Grenada Underwater Sculpture Park dia mamita ny fanavaozana.
Ny fametrahana dia misy sary sokitra 82 mitovitovy amin'ny fiainana izay maneho ny kolontsain'i Grenada ary novolavolaina tamin'ny haino aman-jery isan-karazany fa ny ankamaroany dia avy amin'ny substrate tsotra anisan'izany ny simenitra. Izy ireo dia mamorona substrate mety tsara, somary raikitra sy maharitra, izay mety hivoatra ny zavamananaina an-dranomasina.
Ny valan-javaboary ambanin'ny rano ao Grenada dia nosokafana tamin'ny taona 2006 ary izy no voalohany tamin'ny karazany eran-tany.
Noheverin'ny mpanao sary sokitra britanika Jason deCaires Taylor ilay valan-javaboary ary azon'ny snorkelers sy ny mpitsikilo.
Harem-pirenena ny valan-javaboary ambanin'ny rano ao Grenada ary zava-dehibe ny fikojakojana azy amin'ny fitandroana ny fanintonana madion'ny ranon'i Grenada.
Ny Grenada Tourism Authority (GTA) dia nanambara androany fa ny tetikasa fanavaozana ny Grenada Underwater Sculpture Park (USP), any amin'ny morontsiraka Andrefan'i Grenada ao amin'ny faritra arovana an-dranomasina Molinere Beauséjour, dia vita.
Nambaran'ny National Geographic ho iray amin'ireo zava-mahatalanjona 25 ambony indrindra eran'izao tontolo izao, noheverin'ny mpanao sary sokitra britanika Jason deCaires Taylor ilay valan-javaboary ary azon'ny snorkelers sy ny mpisitrika. ny Grenada Underwater Sculpture Park nosokafana tamin'ny 2006 ary izy no voalohany tamin'ny karazany teo amin'izao tontolo izao. Lasa iray amin'ireo toerana mahafinaritra indrindra amin'ny toerana misy azy.
Ny fametrahana dia misy sary sokitra 82 mitovitovy amin'ny fiainana izay maneho taratra Grenadakolontsaina ary novolavolaina tamin'ny haino aman-jery isan-karazany fa ny ankamaroany dia avy amin'ny substrate tsotra anisan'izany ny beton. Izy ireo dia mamorona substrate mety tsara, somary raikitra sy maharitra, izay mety hivoatra ny zavamananaina an-dranomasina.
Iray amin'ireo sary sokitra malaza indrindra ao amin'ny valan-javaboary ny Vicissitudes, faribolana misy tarehimarika 28 avy amin'ny ankizy Grenadiana eo an-toerana mifamatotra amin'ny tanana. Anisan'ny singa miavaka hafa ny “Mpanoratra Very”, lehilahy iray miasa amin'ny milina fanoratana eo ambony latabatra voarakotra amin'ny fanapahana gazety ara-tantara; “Sienna,” sary sokitra kanto izay mampiseho ny endrika kanto an'ny tanora mpitsikilo hoditra avy amin'ny tantara an-toerana tena tiana; ary ny “TAMCC Faces”, andiana endrika miendrika fiainana toa novolavolaina tao anatin'ny vavahadin'ny vatohara lehibe iray izay nahitana mpianatra tao amin'ny kolejy fiaraha-monina eo an-toerana.
Rehefa nandeha ny fotoana, dia nisy fiantraikany tamin'ny herin'ny tontolo iainana voajanahary ny valan-javaboary. Noho izany, mba hitazomana ny tsy fivadihany, dia natomboka ny ezaka famerenana amin'ny laoniny mba hitazomana ny fahatomombanan'ny tontolo iainana sy ny fandraisana anjara amin'ny zavamananaina an-dranomasina midadasika entin'izany. Niovaova ireo ezaka ireo nanomboka tamin'ny fanamboarana sy fanadiovana rafitra manokana ka hatramin'ny fanesorana sy famindràna toerana hafa.
"The Grenada Underwater Sculpture Park dia harem-pirenena ary ny fikojakojana azy dia zava-dehibe amin'ny fitandroana ny fahadiovan'ny Grenadyny rano," hoy i Petra Roach, tale jeneralin'ny Grenada Tourism Authority. "Noforonina ho toy ny vatohara artifisialy, ny valan-javaboary dia nahasarika karazan-javamaniry an-dranomasina isan-karazany tao amin'ilay faritra hatramin'ny nametrahany azy ary nanome toerana ho an'ny haran-dranomasina - izay zava-dehibe amin'ny ezaka ataontsika amin'ny fiarovana sy ny fanoloran-tenantsika hiadiana amin'ny haran-dranomasina. fanimbana ny hafanan'ny tany. Izahay ato amin'ny Manampahefana ara-pizahantany Grenada dia hanohy hisolo tena sy hanohana ny tetikasa toy izany mba hiantohana ny fahaveloman'ny toerana sy ny ezaka maharitra. "